May 23, 2021 N88LeaveaComment on १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याइँदै, तलब र वृद्ध भत्ता बढ्ने
काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ । यसवर्ष कामदारको तलव वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वृद्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृद्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ […]
May 23, 2021 N88LeaveaComment on नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि खुशीले महन्थ ठाकुरकाे भुइँमा खुट्टै छैन, मनाए दिपावली
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मधेसका जिल्लामा स्वागत गरिएको छ । जनकपुरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षले दिपावली नै मनाएको हो । लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित मधेसी नागरिकको माग पुरा भएको खुशियालीमा दिपावली मनाएको जसपाका यूवा नेता प्रशान्त झाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मधेसी जनताको तर्फबाट राष्ट्रपति […]
अर्घाखाँची । भीरबाट लडेर जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका–७ बामरुखकी १५ वर्षीया सम्झना थापाको मृत्यु भएको छ । बामरुखस्थित जंगलमा बाख्रा चराउन गएकी ती किशोरी भीरबाट करिब ५०० मिटर तल लडेर शनिबार दिउँसो घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । याे पनि समाचार विवाह समारोहबाट एकै टोलका ४४ […]
May 23, 2021 N88LeaveaComment on अध्यादेश जारी भएपछि मधेशमा खुशियाली, महामारी बिर्सेर मैनबत्ती प्रज्वलन
काठमाडाैं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७८ अध्यादेश जारी भएका खुशीयालीमा आज साँझ यहाँ मैनबत्ती प्रज्वलन गरिएको छ । संसद्मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको सो अध्यादेश जारी भएका खुशीयालीमा राजविराजसहित विभिन्न ठाउँमा स्वागत गरिएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंहको शालिक रहेको राजविराजस्थित गजेन्द्र चोक र शहीद दशनचोकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले […]
के नागरिकता अध्यादेशमा भारतीयलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ त ? अध्यादेशमा के छ ? पूर्णपाठ हेर्नु
May 23, 2021 N88LeaveaComment on के नागरिकता अध्यादेशमा भारतीयलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ त ? अध्यादेशमा के छ ? पूर्णपाठ हेर्नु
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको हो । सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री […]
६८१ अरब रुपैयाँ सम्पतीका मालिकको छोरा बने बौद्ध भिक्षु
May 23, 2021 N88LeaveaComment on ६८१ अरब रुपैयाँ सम्पतीका मालिकको छोरा बने बौद्ध भिक्षु
एजेन्सी । ६८१ अरब रुपैयाँ भएका आनन्द कृष्णका पुत्र अजाह श्रीपानोले बौद्ध धम्मलाई स्वीकारेर बौद्ध भिक्षु भए । यस मलेसियालि ब्यापारीको पहिलो बिबाह थाइल्यान्डका राजकुमारीसँग भएको थियो, जसबाट एक पुत्र र एक पुत्री भयो । दोस्रो बिबाह लेटचुइमी हेलेन मेरिसग भयो, जो पेरिसमा म्युजिक रेकर्डिङ हाउसको मालिक थिए । उनिबाट एक छोरी भयो । दक्षीण […]
जब एउटी बेहुलीको घरमा जन्ति लिएर दुई बेहुला पुगे… यसरी दुबै बेहुलाले लगे बेहुली
May 23, 2021 N88LeaveaComment on जब एउटी बेहुलीको घरमा जन्ति लिएर दुई बेहुला पुगे… यसरी दुबै बेहुलाले लगे बेहुली
एजेन्सी । यो कलियुग हो बाँच्न पर्छ अनेक कुरा सुन्न र देख्न पाइन्छ । विश्वास नै नलाग्ने कतिपय घटनाहरु पनि वास्तविक हुन्छ पत्याउन कहरै लाग्छ जसले हामीलाई अचम्मित बनाउँछ । हाम्रो छिमेकी मूलुक भारतमा यस्तै हाँस्यासपद एउटा घटना भएहो छ । उत्तर प्रदेशको कन्नौज जिल्लामा एउटा अनौठो घटना देखियो, जब दुई दुलहा एउटै दुलहीको घरमा […]
May 23, 2021 May 23, 2021 N88LeaveaComment on निर्वाचन अगाडि सबैलाई काेराेनाकाे खोप लगाइने छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि सबैलाई कोराना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकारसँंगको अन्तरक्रियामा उहाँले निर्वाचन अगाडि सबैलाई खोप लगाउने प्रयासमा सरकार जुटेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खोप ल्याउनका लागि विभिन्न देश र खोप उत्पादकसंँग छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा […]
May 23, 2021 N88LeaveaComment on नेप्सेमा नयाँ इतिहास, बजार पूँजीकरण ३९ खर्ब १३ अर्ब
काठमाडाैं । कोरोना कहरका कारण मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भए पनि धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक भने हालसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्सेमा नयाँ इतिहास कायम भएको छ । अधिकांश लगानीकर्ता निषेधाज्ञाका कारण घरमै रहेको तथा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिइएका कारण नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो […]
बाबुकाे थर, ठेगान केही नभए पनि वंशजकाे नागरिकता पाइने
May 23, 2021 N88LeaveaComment on बाबुकाे थर, ठेगान केही नभए पनि वंशजकाे नागरिकता पाइने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबावु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने भएको छ । त्यस्तै बाबुको पहिचान […]